Accueil > Gazetin'ny nosy > Fankalazana ny 29 Martsa : Nalazolazo toa ny fanjakana ankehitriny
Fankalazana ny 29 Martsa : Nalazolazo toa ny fanjakana ankehitriny
Tena mbola tsy nahita fankalazana ny 29 martsa toan’ny tamin’ity taona 2019 ity ny teto amin’ny firenena Malagasy tao anatin’ny taona maro izay. Inona no nitranga fa nangatsiaka dia nangatsiaka ny fankalazana tetsy amin’ny fasan’ny Maherifo tetsy Avaratr’Ambohitsaina izay notarihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina filoham-pirenena. Olona vitsivitsy, tsy nahitana fihetsiketsehana toa ny isan-taona. Zara raha nahitana olona mpanatrika ankoatran’ny manampahefana izay tsy maintsy mandeha amin’ny fotoana toa ireny.
Teo Ambohijatovo izay nametrahana ny tsangambaton’ny MDRM (Mouvement démocratique pour la rénovation de Madagascar) izay natao hahatsiarovana ny tolon’ny tia tanindrazana tamin’ny taona 1947 iny, dia akory ny hagagana raha nahita ny olona izay zara raha nisy 500.Ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian no solontenan’ny fitondram-panjakana tamin’izany. Antsasakadiny fotsiny ny lanonana rehetra dia vita, izay nanomboka tamin’ny 10 ora maraina ka nifarana tamin’ny 10 ora sy sasany.
Ankotran’ny solontenam-panjakana ireo dia fikambanana roa no nanatitra voninkazo tamin’izany koa. Asa izay nahazo ny fanjakana ity fa toa tsy afaka nanentana ny olona toa ny fanaony ny fanjakana Andry Rajoelina izay malaza ho mahay mamory vahoaka sy manao fihetsiketsehana. Koa satria efa tsy maintsy natao iny fankalazana iny dia nanao izany ny Fitondrana misy ankehitriny. Maro ny vahoaka diso fanantenana satria nanantena kabary manentana sy fanentanana feno fitiavan-tanindrazana.
Hita tamin’iny fankalazana teto Antananarivo iny fa tsy manana fitiavan-tanindrazana intsony ny mpitondra firenena. Endrika ivelany ahalalana fa politika ny fitadiavan-tseza fotsiny no misy eto. Tsaroan-tsika ny fankalazana ny 29 martsa tamin’ny fotoanan’ny Fanjakana tetezamita fa natao daholo ny fomba rehetra nilazana fa tia tanindrazana ingahy Andry Rajoelina. Nahoana no natao malazo toa ireny iny fotoana ny fahatsiarovana ny maty sy ny tolona nataon’ny tia tanindrazana tamin’ny taona 1947 iny? Aiza ilay hambopom-pirenena, ny Fanilo miampita izay nodradradradraina tamin’izany fotoana izany? Tena lasa resaka politika fotsiny izy ireny raha nijery ny zava nisy tamin’ny 29 martsa 2019 teo iny isika? Dia inona no fiovana vaovao azo hantenaina ankehitriny?